Xiriirrada: Lammaaneyaasha isku xira lamaanaha | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Relationships Lammaanaha Iskuduwaha
In kasta oo guurka laf ahaantiisa laftiisu noqon karo hay'ad bulsho oo qorshaysan, rabitaanka ah in uu ku jiro lamaane waa mid bayoolaji ah. Galmada iyo isku xirnaanta labaduba waa abaalmarin dabiici ah. Aadanuhu waxay qayb ka yihiin koox ka yar 5% naas la yiraahdo labo shaqaale ah. Tani waxay ka dhigan tahay inaan heysano qaab dhismeedka maskaxda oo aan u diyaarsanaan karno nolosheena, inaan noqonno bulsho isku jinsi ah, sida geela. Waxay noo ogolaanayaan inaan ku xidhno muddo dheer, oo ku filan oo ku filan labo daryeele si ay u keenaan dhalintooda. Si kasta ha noqotee, 'bulsho ahaanba lama socdo' lama mid aha 'jinsi ahaan jinsi' ah. Dareenka ah "ka ciyaarida guriga" waxaa ku jira ku dhawaad ​​dhammaan naasaha oo ay ka mid yihiin aadanaha. Dib u eegis wanaagsan oo suugaaneed ayaa la heli karaa halkan.
The nidaamka abaal-marinta waa meesha ay dhismayaasha isku dhejinayaan. Waa qaab isku mid ah oo nagu kaxeeya abaalmarinta dabiiciga ah ee cuntada iyo biyaha. Nasiib darro, sidoo kale waa meesha laga shaqeynayo ama abaalmarin macquul ah sida khamriga, nikotiinta, iyo daroogada ayaa saameyn ku leh. Waxay ka afduubaan nidaamka raaxada / abaalmarinta. Dhab ahaan, abaalgudyada dabiiciga ah sida cocaine iyo aalkolada ayaa soo saari kara dareen aad u sarreeya oo dabaalanaya marka loo eego galmada. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in lamaanayaasha labadooda, marka la barbardhigo xayawaannada dabiiciga ah ee dabiiciga ah, ay aad ugu nugul yihiin ciyaalka. Waxaan arki doonaa waqti danbe hoosteeda "Coolidge Effect" ee hoos ku qoran sababta sababa tani waa dhibaato dhab ah oo lagu hayo jacaylka.
Iskudhinta iyo kalsoonida waa muhiim. Waxaan inta badan dooneynaa inaan jacaylka u muujinno jirkeena sida dhirbaaxada, dhunkashada, careysiga, fekerka iyo galmada. Gacal galinta taabashada "waxa ay soo jiitaa digaagga duufaanka" waana mid aad u bogsanaya. Lammaanaha leh xiriir wadaag ah oo jacaylku dhab ahaan jir ahaaneed bogsii degdeg ah ka dib dhaawaca. Haddii aynu ka fikirno jacaylka jacaylka ah 'jacayl', ama sida xamaasada iyo rabitaanka, dareenadaas iyo dareenadaas ayaa ah kuwa ugu horreeya maskaxda. Sidii aan u baran lahayn intii aan awoodno sida aan u shaqayn karno maskaxdeena waxay naga caawineysaa inaan aragno dareenka nololeed ee kor u qaadaya hab dabiici ah si joogto ah.
<< Jacaylku Sida Isku Xidhnaanta Jacaylka Sida Rabitaanka Galmada >>